Irreechi baranaa Fulbaana 22 hora Finfinneetti, Fulbaana 23 ammoo hora Harsadiitti’akka duraanitti’ nama hunda hirmaachisee kabajama – Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa – AMBO TV
Irreechi malkaa hora Finfinnee fi Hora Harsadii bara 2021 uummata Oromoo biyya keessaa fi alaa mara akkasumas sabaa fi sab-lammoota haala hirmaachiseen akka kabajamu murteessuu Gamtaan Abbootii Gadaa Oromoo beeksise.
“Akka duraaniitti, odoo waan tokko keessaa hin hafiin, qeerroon qarreen, jaarsaa jaartiin haa irreeffatu kan jedhu murteessiine,” jechuun Abbaan Gadaa Tuulamaa fi barreessaan Gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa himan.
Ayyaanichi bara darbe sababa weerara koronaavaayirasiin namoota murtaa’e qofaan ture kan kabajame.
Oromoon dhaha ilaallate guyyaa ayyaanota adda addaa murteessa kan jedhan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa, Irreechi malkaa bara kanaa Fulbaana 22 hora Finfinneetti, Fulbaana 23 ammoo magaalaa Bishooftuu hora Harsadiitti akka irreeffatamu murtaa’uus himaniiru.
Murteen kun Gamtaan Abbootii Gadaa Oromoo marii Biiroo Aadaa fi Turiizimii Oromiyaa waliin Kibxata magaalaa Adaamaatti gaggeesseen booda murtaa’e.
Kabaja Ayyaana Irreechaan wal-qabatee yaaddoon nageenyaa fi Covid-19 jiraachuu kan himan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa, dhimma nageenyaa qaama dhimma nageenyaatiif, dhimma Covid-19 ammoo biiroolee fayyaa magaalaa Finfinnee, Oromiyaa fi Federaalaatti kennineerra jedhan.
Akka mootumaan jedhutti Weerarri koronaa vaayirasii tibbana Itoophiyaa keessatti akkaan dabalee jira. Guyyaa kaleessaa qofa namootni 37 dhukkuba Covid-19n kan du’an yoo ta’u, kunis lakkoofsa namoota du’anii isa olaanaadha.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa gosti vaayirasii ariitiin tamsa’uu fi nama ajjeesuunis hamaa ta’e ‘Delta virus’ jedhamu Itoophiyaa keessatti argamuu beeksiseera.
Ibsi ministeera Fayyaa kun yeroo hundumaa walitti gurmaa’uu uumata oromoo sodaachuudhaan kan hafaarfamuu malee fayyummaa ummata biyyattiif yaada’anii akka hin taanee fi agaarsiistuuwwaan adda addaa kanneen hiriira paartii biyya bulchuu fi deegaarsa rayyaa ittisa biyyaa kanneen kalattidhaan midiyaalee mootummaatiin taamsaasa’aa turan agarsiifni sirbaa fi waraanaa adda durummaan kanneen qeeqaan hedduu dha. Kanneen haasofsifne keessa maqaan isaanii akka dhahamuu kan hin feene mootummaan afaan koronaayyuu waan dhaga’ee dubbatu deegartoota koo hin tuqiin oromoo garuu fixi irratti humna godhatta waan jedhe fakkataa jechuun qoosaa akka ta’ee fi tooftaa siyaasaaf akka olfaame dubbatu.
Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa fayyaa uumataa oromoof dhimmuun”Uummatni dhimma weerara kanaarratti hubannoo akka argatu, maal gochuu akka qabu ibsa akka argatu biiroolee fayyaatti kennineerra,” jedhan
“Kan bar-dheengaddaa hanga dhukkubichi mataafi miilli beekamuutti, hanga wanti ija dura of qaban baramuutti, hanga uummata biratti xiyyeeffannoo argatutti” jedhamee namoota muraasaan akka kabajamu murtaa’e jedhan. Ummanni garuu shira mootummatiin akka hafe wal nama hin gaafachiisu jedhu.
Dhuma irrattis Irreecha Finfinnee bara kanaa irratti namootni miliyoona 10 ta’an irratti argamu jedhanii akka eeganis Abbaan Gadaa himaniiru.
Previous PostMet Gala 2021 Best Dressed Celebrities on the Red Carpet
Next PostDhaabbanni Balenciaga kofoo gadi siqee uffatamuun wajjin paantii hodhee mashinii jedhe dhiyeessuus jibba sanyummaa gurrachoota waan qabuuf irratti duulame